Home Wararka Daacish oo sheegatay Dil loo geestay Mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Dowlada...
Daacish oo sheegatay Dil loo geestay Mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Dowlada Soomaaliya
Kooxda Daacish ayaa sheegatay dilka labo ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha rayidka ee dowladda oo ka dhacay Muqdisho.
Labada ruux ee la dilay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen shaqaalaha maaliyadda ee dowladda.
Sawirro ay soo bandhigtay Wakaalada wararka u faafisa Daacish ee Amaq ayaa muujinaya labo nin oo geysanaya toogashada.
Dilkan ayaa ka mid noqonaya dilal taxane ah oo ISIS ka fulisay Muqdisho, kaasoo muuqaalo laga duubay.
Kooxda Daacish ayaa kordhisay weerarada sida dilalka qorsheysan oo ay muddooyinkii u dambeysay ka fulisay magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye.
Previous articleGobolka Bakool oo laga waayay Xabsi lagu xiro dadka ay Ciidamada soo qabtaan
Next articleAgaasimaha Hay’adda Nabadsugida Qaranka oo qarka u saaran in uu iscasilo
Jubballand Oo ka hadashay Haween soomaaliyeed Oo ay Ciidamada Kenya Kufsadeen
Xog: Villa Soomaaliya oo ka Shaqeeyneeyso sidii loo kala diri lahaa...